UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Dhuusamareeb & Xaaladda … | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Dhuusamareeb & Xaaladda …
Waa sawir ka mid ah dagaalkii maanta ee Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaarayo Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in uu is iskiis ah u istaagay dagaalkii qaraaraa ee maanta ka qarxay magaalada, una dhaxeeyay Ciidamada Dowladda iyo Xoogaga Ahlu Sunada Galmudug.
Dagaalka ayaa daba socday iska horimaad caweysnimadii xalay ahayd labada dhinac ku dhex maray Magaalada Dhuusamareeb, waxaana uu magaaladaasi dib uga qarxay sagaalkii subaxnimo ee saakay, iyadoona uu fiidnimadii caawa soo gaaray.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna ayuu gabalka ugu dhacay meelihii ay kala jooggeen, mana jirto cid wax horumar ah ka samaysay dagaalka uu dhiigga badani ku daatay.
Dagaalka ayaa gelinkii dambe ee maanta sii xoogeystay, ka dib markii ciidan gurmad ahaa oo laga diray Magaalada Muqdisho, ay ku biireen Ciidamadii Dowladda ee la dagaalamayay Xoogaga Ahlu Sunna.
Ciidamada Dowladda oo culeys xoogan soo saaray Xarunta Inji ayaynaan u suurta-gelin inay foodda geliyan xaruntaasi, ka dib markii ay ka hor istaageen Xoogaga Ahlu Sunada Gobolada Dhexe.
Dagaalkan oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday ayaa ahaa mid lagu jilbo murxay, waxaadna dhinacyadaasi ka arki kartay sida ay dagaalka waqtiga badan qaatay ugu daaleen.
Suxufiyiinta Magaalada Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in dagaalku uu iskiis ah u joogsaday, isla-markaana aanay jirin cid xabad joojin kala dhex dhigtay labadaasi garab.
Dagaalka oo sagaal saacadood oo xiriir ahaa ka socday Magaalada Dhuusamareeb ayaad mooddaa inay labada dhinacba door bidayeen bal inay ka nastaan gumaca rasaasta.
Marka ay noqoto khasaaraha ka dhashay dagaalka, inkastoo ay adag tahay in macluumaad sax ah laga helo inta uu gaarsiisan yahay ayaa hadana waxaa soo baxaya warar sheegaya inay ku dhinteen in ka badan shan iyo toban qof oo u badan dhinacyadii uu u dhaxeeyay, halka tiro ka badan laba iyo labaatan kalena ay ku dhaawacantay.
Dhanka kale, shacabka ku dhaqan Magaalada Dhuusamareeb ayaa barakac ka wada magaalada, iyagoo u cararaya deegaanada hoos-tagga magaaladaasi.
Shacabka ayaa waxay magaalada isaga baxayan iyagoo cagahooda maallaya, mana jirto wax gaadiid ah oo lagu arkayo wadooyinka magaalada, aan ka ahayn kuwa ciidamada.
Magaalada ayaa ah mid haawanaysa, waxaana laga dheehan karaa saan-saanta colaadeed ee ka jirta. Dhuusamareeb waxay maanta u ahayd mid ka mid ah maalmihii ugu adkaa ee soo mara, inta ay taariikhda xuseyso.
Ugu dambeyn, masuuliyiinta labada dhinac ayaan illaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin dagaalka lagu riiqmay, ee maanta gilgilay Magaalada Dhuusamareeb.
Dagaalkii Dhuusamareeb oo iskiisa u istaagan
Xaaladda oo degan